अनशनरत डा. केसीको माग पूरा गर्न आग्रह गर्दै चिकित्सक संघद्वारा कडा आन्दोलनको घोषणा – Everest Pati
काठमाडौं, २४ असोज । सरकारले आमरण अनशनमा रहेका डा. गोविन्द केसीको मागप्रति बेवास्ता गरेको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघले आइतबारदेखि कडा आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । उस्ले देशभरका स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालमा आकस्मिक र कोभिड–१९ बाहेकका सम्पूर्ण सेवा बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ ।संघले २७ दिनदेखि आमरण अनसनरत डा। केसीको जीवन रक्षाका निम्ति सरकार गम्भीर नभएको र वार्तालाई सीमित गराएको भन्दै भोलि आइतबार आकस्मिक र कोभिड–१९ बाहेकका सम्पूर्ण सेवा बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । २५ गतेसम्म सत्याग्रह अन्त्य नभए कडा आन्दोलन गर्ने भन्दै चिकित्सक संघले चेतावनी दिएको छ ।
सरकारी वार्ता टोली र डा. केसी पक्षबीच शुक्रबार मध्यराति करिब डेढ घण्टा भएको वार्ता बिनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो । बिहीबार भएका सहमतिबाट पनि सरकार पछि हटेको केसी पक्षले आरोप अगाएको छ । डा. केसीका समर्थकले काठमाडौंको माइतीघरसहित मुलुकका विभिन्न स्थानहरुमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
यसैबीच सरकारले अनशनरत डा. केसीलाई अनशन तोडन आग्रह गरेको छ । केसी पक्षसंग सहमतिको प्रयास असफल भएपछि शिक्षा सचिव गोपी मैनाली नेतृत्वको सरकारी वार्ता टोलीले शनिबार वत्तव्य जारी गर्दै डा. केसीका मागबारे आफ्नो धारणा समेत सार्वजनिक गर्दै अनशन तोडन आग्रह गरेको हो ।
जातिय बिभेद अन्त्य गर्न मुगु काँग्रेसले एक महिने अभियान थाल्ने